people Nepal » नुवाकोटमा कांग्रेस नेता पैसासहित समातिए नुवाकोटमा कांग्रेस नेता पैसासहित समातिए – people Nepal
नुवाकोटमा कांग्रेस नेता पैसासहित समातिए
Posted on May 12, 2017 by Durga Panta
२९ बैशाख, काठमाडौं । स्थानीय चुनावमा नुवाकोटका मतदातालाई रकम बाँडेको आरोपमा कांग्रेसका एक नेतालाई एमाले कार्यकर्ताहरुले नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
विदुर नगरपालिका-९ दशमुरेचौतारोका दलित समुदायलाई रकम वितरण गरेको आरोपमा कांग्रेस जिल्ला सचिव सुरेन्द्रराज अधिकारीसहित तीनजनालाई एमाले कार्यकर्ताहरुले मध्यराति नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
एमालेको नियन्त्रणमा परेका सुरेन्द्र विदुर नगरपालिकाका कांग्रेस मेयर उम्मेदवार ध्रुव अधिकारीका भाइ हुन् । सुरेन्द्रसहित त्रिभुवन त्रिशुली माविका शिक्षक नवराज आचार्य र उत्तरगया अंग्रेजी विद्यालयका प्रिन्सिपल सुनील श्रेष्ठलाई घेरा हालेर स्थानीयको सहयोगमा एमाले कार्यकर्ताहरुले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
उनीहरुलाई प्रहरी निरीक्षक जीतेन्द्रकुमार बस्नेतको रोहबरमा राति साढे १ बजे छाडिएको थियो ।
अधिकारीका साथबाट एमाले कार्यकर्ताले २५ हजार रुपैयाँ बरामद गरेका थिए । एमालेको तर्फबाट विदुर मेयरका उम्मेदवार सन्जु पण्डितले अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायमा उजुरी दिएका छन् ।
एमालेले बन्दी बनायो, आचारसंहिता उल्लंघन गर्‍योः कांग्रेस
नुवाकोट कांग्रेसले शुक्रबार बिहान विदुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी रकम वितरण गरेको आरोपको खण्डन गरेको छ । विदुर नगरपालिकाका कांग्रेस मेयरका उम्मेदवार ध्रुव अधिकारीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई गलत आरोपमा तीन घण्टा बन्दी बनाइएको र हिँडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार हनन् गरेको बताए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै विदुर नगरपालिकाको उपमेयरको कांग्रेस उम्मेदवार गीता अमात्यले पनि एमालेले कांग्रेसको चरित्रहत्या गर्न खोजेको बताइन् । उनले चुनावको बेला २५ हजार रुपैयाँ साथमा हुनु सामान्य भएको भन्दै रकम बाँडेको पुष्टि गर्न उनले एमालेलाई चुनौति दिइन् । उनले भनिन्, ‘त्यसरी बाँड्ने पैसा पनि छैन, हामी बाँड्दा पनि बाँड्दैनौं । अहिले जुन आरोप लगाइएको छ, त्यसको पुष्टि गरेर देखाउनुस् ।’
अमात्यले नुवाकोट घटनाको यसरी बेलिबिस्तार यसरी लगाइन्ः
हिजो प्रचार प्रसार १२ बजेसम्म मात्रै भनेको थियो । हामीले सात दिनमात्रै पायौं प्रचार प्रसारका लागि । त्यसका कारण अलिकति लेटसम्म पनि प्रचार-प्रसार गर्दै हिँडेका थियौं । थुम्का भन्ने ठाउँमा हामीले प्रचार-प्रसार गरेर मसहितको टीम एकातिर लाग्यो र हाम्रो नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सचिव सुरेन्द्र अधिकारी लगायतका उहाँका दुई जना मित्रहरु सँगै जाँदै हुनुहुन्थ्यो ।
सुरेन्द्र सर त वकिल पनि हुनुहुन्छ । कामको व्यस्तताका कारण आफ्नो दैनिक काममा चाहिने चिजहरु सधैं ब्यागमा बोकेर हिँड्ने बानी छ उहाँको छ । तपाईंले ब्याग बिना उहाँलाई कहिले पनि भेट्नु हुन्न, सधैं ब्याग बोक्नुहुन्छ । हिजो पनि ब्याग बोकेर चुनाव प्रचारका लागि साथीहरुसँग भेट्न जानुभाथ्यो । त्यही क्रममा एमालेका साथीहरु, ग्रुप क्याम्प खडा गरेर खाना बनाइराख्नु भएको रहेछ । त्यहाँ सधैं क्याम्प खडा भइरहने, त्यही बाटो भएर जाँदाखेरि उहाँहरुले साथीहरुलाई समातेर साढे तीन घण्टा जति बन्दी बनाएर राख्नुभयो । उहाँको ब्याग पनि त्यहीँ खोतलखातल गरेर पैसा बाँड्न आको भन्नुभयो । खोतल्दाखेरि जम्मा २५ हजार भेटियो ।
हामीसँग त्यसरी बाँड्ने पैसा पनि छैन, हामी बाँड्दा पनि बाँड्दैनौं । त्यसमाथि पनि हाम्रो सुरेन्द्र सरले त्यसरी बाँड्नु पनि हुन्न । हामीसँग २५ हजार भन्दा थिँदा पनि थिएन । हामीले त्यो फोटो खिचेर पनि राखेका छौं । उहाँहरुको भिजुअलमा पनि त्योभन्दा बढी भेटाउनु भएन । यदि त्योभन्दा बढी भेटाउनु भाको रहेछ भने प्रुफ गरेर देखाइदिनुस् हामी गल्ती स्वीकार्न तयार छौं भनिरहेका छौं ।
त्यत्रा तीन-चार सय मान्छेले अगाडि बसेर हेर्नुभएको छ । त्यहाँ पैसा छ कि छैन सबै जानकारी छ उहाँहरुलाई । प्रुफ गरेर देखाइदिनुपर्‍यो नि त । झुठो कुरो लेख्न पाइन्छ त ?
आचारसंहिता अनुसार त क्याम्प खडा गरेर मतदाताहरुलाई बन्दी बनाएर राख्न पाइँदैन । उहाँहरुले -एमालेले) दुई ठाउँमा क्याम्प राखेर मतदाताहरुलाई ७-८ दिन भयो त्यहीँ खाना खुवाउने, त्यहीँ राख्ने अनि त्यहीँबाट परिचालन गर्ने गरिराख्नु भाछ । तर, हामीले कुनै ठाउँमा क्याम्प खडा पनि गरेका छैनौं । कुनै पनि साथीहरुलाई बन्दी बनाएर पनि राखेका छैनौं हामीले ।
यो मानव अधिकार उल्लंघन पनि हो व्यक्तिगत र पार्टीगत रुपमा आक्षेप लागेको कुरा पनि हो यो । अहिले चुनावको बेलामा २५ हजार रुपैयाँ भनेको त धेरै कुरा पनि होइन । लाखौं लाख भएको भए हामी पनि मान्थ्यौं । २५ हजार राख्दामा हाम्रो पूरै चरित्र हत्या नै गर्ने गरी न्यूज बनाएर प्रसारण गरिएको छ । पत्रकारहरुले के गरेको हो त्यो ? पत्रकारहरुलाई सजायँ हुँदैन कि ? मिडियाको नै बेइज्जत हुने भइसक्यो । यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्‍यो होइन भने हामीबाट पनि माथिबाट कदम चाल्ने कुरा हुन्छ